asambodo: - ISO9001-2015, CE, RoHS, UL, FCC, SGS
120ml Ultrasonic Wood Ọka USB Diffuser
1.MULTI-Ọrụ: USB mini aromatherapy diffuser na-enye ọtụtụ elele. Jiri dị ka a obere diffuser, ụlọ ọrụ ikuku ume ma ọ bụ humidifier. Jiri ikuku na-esi ísì ụtọ juputa ebe niile, nwee ọhụụ na-adịghị ọcha.
2.By na-ekesa ihe na-esi ísì ụtọ na ume ume: nke a na-ekesa ike nwere ike ibuli nrụgide site na ụbọchị ọkụ ọkụ, zuru oke maka ikpuchi anwụrụ ọkụ na isi ísì si anụ ụlọ gị.
3.Whisper-Quiet Ultimate Operation: Mee ka ebe obibi gị dị ala iji gbochie akọrọ, ikuku ikuku na ọrịa na-efe ndị ị hụrụ n'anya. Gbochie akọrọ na chapped akpụkpọ ke ini etuep ọnwa ma ọ bụ ikuku ọnọdụ ụlọ.
4.Easy Automatic Off Function: Mechie mgbe mmiri gwụchara. Ọ bara uru maka ụlọ, yoga, ọfịs, spa, ime ụlọ, na ime ụlọ ụmụaka. Ezigbo onyinye maka ezinụlọ gị na ndị enyi iji nweta ezumike na-esi ísì ụtọ.
mmepụta DC4V, 1A
Nhazi %116 * 142mm
unit ibu 380g
Ogo igbe agba 12 * 12 * 15.5 cm
Oke kaadionye 50 * 37.5 * 34CM
NW / katọn 9.5kgs
GW / katọn 10.5kgs
SOICARE Simple Design 2.2L Aromatherapy Mkpa Mmanụ Humidifier Diffuser